Nezve mbanje | MyWeedSeeds.com
Hemp uye mbanje musiyano
Hemp chirimwa chinoshamisa chakarimwa kwezviuru zvemakore. Iyo inoshamisa isingachinjiki uye yakakosha, asi zvakare inoshamisa kupokana zvakare. Kana vanhu vazhinji vachifunga nezvehemp, mufananidzo wembanje unopinda mumisoro yavo nekuti zvirimwa zviviri izvi zvinowanzo nyonganiswa sechigadzirwa chimwe chete. Hemp zvigadzirwa, senge zvipfeko kana zvikwama ...
Hemp uye mbanje chokwadi
Kuti zvive nyore kutsanangura, isu tichareva hemp na "Cannabis sativa". Zvimwe zvinomera zvembanje zvinogona kunzi hemp, zvisinei, iyo cannabis dzakasiyana hemp inoonekwa seinonyanya kubatsira. Iro zita, "Cannabis sativa" rinotoreva kuti "Inobatsira Hemp" kana yaputswa. Hemp inonyatsovira kune chero chirimwa chine kugadzikana kwakanyanya iko kwekutanga humanoid ...
Mbanje uye zvinoitika pavanhu
Vanhu vazhinji havangakwanise kufungidzira kuti nhoroondo yembanje inodzokera kumashure zvakadii munguva. Zviuru zvemakore apfuura ndipo pakatanga kurimwa cannabis. Kune zvinyorwa zvakanyorwa zvakadzokera kumakore makumi maviri nemasere BC zvichitaura nezvekushandiswa kwemushonga wembanje kuChina. Izvi zvinokwana makore anopfuura zviuru zviviri zvekuratidzwa kwembanje pakati petsika dzenyika.
Unyanzvi hwekare hwekugadzira hashish
Maitiro ekugadzira hashi akachinja zvishoma kubva pakatanga humanoid kutanga kusangana nemiti yembeu yakakura. Kubvisa iro rakura resini rave kunatsiridzwa asi iro rekutanga chimiro richiri rakasimba. Maitiro ese anotendera vanhu kubvisa uye kuchengetedza mbanje resini ndizvo zvinoita kuti hashi ive nezvayo. Izvo zvipembenene ...